Ukubhema ekukhulelweni kunemiphumela emibi
Ukushada indiva ngenxa yokubhema ngesikhathi sokukhulelwa
Ukwandisa ingozi yomdlavuza hhayi kuphela kumama othumayo
Gwema ngokugcwele ukubhema ekukhulelweni
Ngokwezibalo, cishe amaphesenti angu-30 ababhemayo basebenzisa ugwayi wabo ekuqaleni kokukhulelwa. Kulezi, isigamu sazo sikwazi ukugcina izandla zabo eziqhamukayo ezinyangeni zokuqala zokukhulelwa. Ukubhema ngesikhathi sokukhulelwa kunomthelela omubi omkhulu.
Ukubhema ekukhulelwe - kunemiphumela ephawulekayo
Konke okunye, ngamaphesenti angu-15, noma kunjalo, ukulutha komuthi we-nicotine kunquma kakhulu ukuphila kwansuku zonke ukuthi kuzolimaza ingane yakho ngamabomu.
Ukubhema ekukhuleleni kuyinhloko!
Okuqukethwe kwe-diaper yokuqala kwembula umthwalo womusi womama ngesikhathi sokukhulelwa
Njengoba i-meconium - noma i-colloquially futhi njenge-Kindspech - ihlaba isikhala esihlalweni sokuqala ngemva kokuzalwa, esithandwa ngumntwana. Lezi fomu sezivele zakhiwe kusukela ngenyanga yesine yokukhulelwa. Iqukethe i-bile enamandla, amangqamuzana ekhanda elimangcwaba futhi igwinya amniotic fluid, okungaba nezinhlamvu zamangqamuzana nezinwele.
Ucwaningo luye lwabonisa nokuthi lungathola futhi imetabolite engcolisayo kanye nezidakamizwa ezidliwe phakathi nezinyanga zokugcina ze-6 zokukhulelwa. Kodwa-ke, ukuhlaziywa okuningiliziwe kwenani lomusi okwakuboniswa ngumama ngesikhathi sokukhulelwa akunakwenzeka.
Njengoba kulindeleke, odokotela kanye nochwepheshe bayeluleka kakhulu ngokubhema ngesikhathi sokukhulelwa. Ngokuyinhloko, ukukhula kwe-fetus kuyingozi futhi ingozi yokungakabi isikhathi noma, esimweni esibi kunazo zonke, ukukhulelwa kwesisu kukhuliswa ngendlela eqhubekayo. Ngaphezu kwalokho, ingozi yezinkinga ezinjengezitho ezikhubazekile noma izitho zanda.
Ngaphezu kwalokho, kuye kwafakazelwa ukuthi izingane ezizalwa ngokubhema abesifazane abakhulelwe zilinganiselwa ku-200 amagremu ngaphezu kokukhulelwa okujwayelekile. Lokhu kungenxa yokuthi, ngenxa yokubhema, imithwalo yegazi kamama isincane.
Ngakho-ke, ukuhlinzekwa nge-cord umbilical kuyawohloka futhi ingane ithola izakhi ezincane kanye ne-oxygen enikeziwe, enomthelela omubi ohlala njalo ekukhuleni nasekuthuthukisweni kwayo. Ngaphezu kwalokho, ingozi yokutheleleka kamuva noma ukufa kwezingane cishe cishe kabili phezulu.
Ucwaningo luye lwabonisa ukuthi ukubhema abesifazane abakhulelwe bafika izikhathi ezingu-13 ngosuku ngenxa yokukhala. I-extrapolated esikhathini sokukhulelwa okujwayelekile kwezinyanga eziyisishiyagalolunye, lokhu kuholela mayelana nokubhema kwe-3600. Uma ngisho namakhemikhali e-4000 afakwe kumsiyi ugwayi, okuyingxenye ye-carcinogenic futhi enobuthi obucayi kakhulu, kucatshangelwa, kungaba yinto embi.
Iqiniso lokuthi ababhemayo bathatha ingozi enkulu kakhulu yokudla kaningi kanomdlavuza isikhathi eside. Kodwa ngisho nangomntwana ukubhema ngesikhathi sokukhulelwa, isisekelo sesifo esilandelayo senziwa umdlavuza. Kulokhu, isifundo seJalimane Cancer Research Centre sathola ukuthi abantwana bomama ababhema ugwayi ngenkathi bekhulelwe bangamahora angama-1,5 amathuba amaningi okuba nesifo sofuba nesiphezulu sokuphefumula. Emdlavuza wamaphaphu cishe mayelana ne-1,7-yanda futhi isifo somdlavuza wesisu ngisho kathathu.
Ngakho-ke, isiphetho singaba kuphela ukuthi abesifazane abakhulelwe kufanele bayeke ukubhema. Lokhu akuyona into ezuzisa kuphela ingane engakazalwa. Umama uzokwazi futhi ukubona imiphumela emihle yokuyeka ukubhema ngemuva kwamahora ambalwa nje. Ngakho-ke, ngemva kwemizuzu engu-20, ukwehla kwegazi nokushaya kwenhliziyo kungabonakala. Kungakapheli amahora ayisishiyagalolunye, izinga le-carbon monoxide egazini selivele lihle kakhulu. Lokhu kuzophinde kwambone ingane ngokushesha, ngoba manje ithola inani elanele le-oxygen nezakhi.
Uma ukubhema ukuvinjelwa, noma kunjalo, ohlala nabo noma abangane bokuphila kanye namadoda abesifazane abakhulelwe akufanele bazizwe bengenakuphikiswa. Kanti futhi, ukubhema komama okungenakwenzeka kungasongela ingane esibelethweni. Ngakho-ke, indlu lapho abesifazane abakhulelwe bahlala khona basuke bengabhumi. Yiqiniso, ukubhema kufanele kugwenywe ngisho nangemva kokukhulelwa.
Yeka ukubhema | impilo
Ikhasi lokubala lokukhulelwa umntwana
Yeka ukubhema - hlala ungabhemi
Yeka ukubhema ngokusebenzisa i-hypnosis
Yeka ukubhema ngaphandle kwempawu zokuhoxisa
Ukunakekela ingane umlomo namazinyo umntwana
Ukunakekelwa kwezingane - ukunakekelwa komntwana
Ukubeletha | ingane